Banaan Baxyo Ka Dhan ah Dawladda Farmaajo oo Laga Abaabulayo Muqdisho | Baligubadlemedia.com
Banaan Baxyo Ka Dhan ah Dawladda Farmaajo oo Laga Abaabulayo Muqdisho
April 17, 2019 - Written by admin
Siyaasi Salaad Cali Jeelle ayaa ka hadlay mudaharaadyo waa weyn oo uu sheegay inay ku soo wajahan yihiin dawlada federaalka ah ee soomaaliya.
Siyaasi Salaad Cali Jeelle oo warbaahinta la hadlay mar uu ka soo baxay xarunta madaxtooyada ayaa sheegay in dawladu ay ka war hayso mudaharaado ay qaban qaabinayaan mucaaridka ka soo horjeeda dawlada iyo xisbiyada siyaasada qaarkood.
Siyaasi Jeelle ayaa tilmaamay in dhaqaalaha ku baxaya mudaharaadadaasi laga keenay dalka Imaaraadka isaga oo sheegay inuu arintaas fududeeyey raysal wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke.
Siyaasi Jeelle ayaa hadalkiisa ku bilaabay “waxa la wadaa mudaharaado lagaga soo horjeedo dawlada oo ay qaban qaabinayana mucaaridka iyo xisbiyo siyaasadeed,waana mid la doonayo in lagu wiiqo umada iyo dawladnimada soomaaliya, waxaanan ognahay inay wadaan dad u adeegaya dawlado shisheeye ay dabada ka riixayaan banaan baxyadan.”
Siyaasi Salaad Cali Jeelle oo hadalkiisa sii wata ayaa intaas raaciyey ” Waxa qayb ka ah dadka wada banaanbaxyadan raysal wasaarihii hore ahna senator ka tirsan aqalka sare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, kaas oo u adeegaya danaha dawlado shisheeye.”
Siyaasi Salaad Cali Jeelle ayaa haatan u muuqda inuu cadaystay taageerada uu u hayo dawlada federaalka ah ee soomaaliya ee uu hogaaminayo raysal wasaare khayre isla markaana madaxweynaha ka yahay Farmaajo